Igumbi lokuSebenza kweMigodi yamanzi kunye noTywala
Ngo-1851, urhulumente waseburhulumenteni wase-United States waqalisa ukuphoqa amaNdiya aseMerika ukuba akazange abulawe kwiminyaka emashumi eminyaka edlulayo kwiindawo ezizinzile. Emva kwekhulu leminyaka, ngowe-1956, urhulumente wagqiba kwelokuba wayenetyala kumaNdiya waza wakha izibhedlele. Ngelishwa, akusoloko "ingcamango ebalulekileyo."
Namhlanje, iimeko kwizo zibhedlele, ezihlasele izibhedlele, kunye nezixhobo zabo ezidlulileyo kunye nabasebenzi abangabanelisekanga, ziphakamisa "iingxakeko ezinzulu malunga nokukhuseleka kwesigulane," ngokutsho komhloli-jikelele wephephandaba .
I-nqununu ye- federal federal care provider kunye nokukhuthaza impilo ye-2.2 yezigidi ezilinganiselwa kwizigidi ezingama-3.7 zabantu baseMerika nabama-Alaska abahlala e-United States yiNkonzo yezeMpilo yaseNdiya (i-IHS), i-ejensi kwiSebe lezeMpilo kwiSebe lezeMpilo lase-United States IiNkonzo (HHS).
Njengomthombo oyintloko wemisebenzi yononophelo lwezempilo, i-IHS isebenza kwizibhedlele zokunakekelwa kwamaziko angama-28 ezinika iinkonzo zonyango eziphambili kunye nokhuseleko olukhuselekileyo kwizigulane kunye nezigulane kubantu abangama-567 ezizwe ezahlukileyo . I-IHS iphinda isebenze iikliniki ezininzi kunye nezigulane zezempilo.
Ngomnyaka we-2016, malunga nesigidi okanye i-IHS ye-$ 1.8 yezigidigidi ze-HS ze-Indiya kunye ne-Alaska Iinkonzo zonyango zempilo zakwaNdiya kunye ne-Alaska zabelwe iintlanga eziphathekayo eziphathekayo. Isiqingatha sohlahlo lwabiwo-mali siya kwiintlanga zakwa-Indiya okanye kwimibutho yamazwe enesivumelwano kunye / okanye i-compact with IHS.
Ngethuba lonyaka-mali ka-2013, i-IHS-run and tribally runs hospitals yabika ngaphezu kwezigidi ezi-13 izihlandlo zokugula kunye nabangama-44,677 abangenayo abagulayo. Phantse isiqingatha sabamkelwayo (izigidi ezingama-20,469) ziza kwizibhedlele ezine-IHS.
Kodwa iingxaki zivame kwiIbhedlele zaseNdiya
Ngokudabukisayo, ngaphezu kwekhulu leminyaka emva kokubulawa koBulala Knee, izimo zaseburhulumenteni base-United States ziqhuba izibhedlele zaseNdiya ziyaxakeka.
Ngokwe- Oktobha 2016 ingxelo evela kwiSebe lezeMpilo kunye neeNkonzo zoLuntu (HHS) uMhloli-Jikelele we-GG (Daniel) Levinson, izibhedlele ezingama-28 ze-IHS zihlala kwiindawo ezi-8 kuphela, kwaye zihlala kwindawo ezikude. Izibhedlele ezongezelelweyo ezingama-18 ezisebenza zizizwe okanye iintlanga zisebenza phantsi kweemvumelwano kunye ne-IHS.
Ngokutsho kweGG Levinson, zonke izibhedlele ezingama-46 zijongene nazo, "imingeni emininzi" yokuba "i-warrant igxininise ingqalelo ekunakekeleni ukhathalelo oluphezulu."
Zininzi zezibhedlele zifumaneka ngaphezu kweekhilomitha ezingama-200 ukusuka kwisixeko esiseduze.
"Omnye umlawuli [esibhedlele] uxelele ukuba izigulane kufuneka zihambe ngeekhilomitha ezili-100 ukuya kufumana unakekelo olulandelayo, olunokuba lunzima kakhulu kwizigulane ekupheleni kwendlela yokuphila," kusho ingxelo.
Omnye umphathi wesibhedlele ocashunwe kwingxelo ichaza indlela ukungabikho kwemithombo, njengamakhaya asebekhulile kunye neekliniki zokuvuselela kwiindawo ezizungezile kunye neemeko "zeThathu," ngamanye amaxesha kunokuthintela isibhedlele ukuba ikhuphe izigulane, ngokukodwa ngeenyanga zasebusika. "
Ngelixa ezininzi zezibhedlele zivuma ukuba zimbalwa zonyango, inani lezigulana ezifuna ukunakekelwa kwabangaphandle linyuswe ngaphezu kwe-70% ukususela ngo-1986 ukuya ku-2013, ngokugqithiseleyo zidlulele kwizibhedlele zokuziphatha.
Ngenxa yoko, izigulane zijamelene nobunzima ekuqeshweni kunye nexesha elide lokulinda ukufumana unonophelo.
Ngelixa izibhedlele ze-IHS zingabhekisela kwizigulane kwizibhedlele zangasese okanye kwiikliniki, uhlahlo lwabiwo-mali lwaloo mali aluvumelekanga. Ngethuba lika-2013 kuphela ngaphezu kwezigidi eziyi-147,000 izicelo zokuthunyelwa zihanjisiwe, ngokwemibiko.
Nangona ukwanda ngokukhawuleza kwenkqubo yokugonywa kwabagulayo kunye nokugcinwa koogqirha kuya kuhlala kuphantsi. Ngo-2014, izinga lezithuba zonyango kwi-IHS izibhedlele zazingama-33%, xa kuthelekiswa ne-18% kuphela kwizibhedlele kwilizwe lonke.
"Izibhedlele zibonisa ukuba kunqongophala kwabasebenzi ukuhlukaniswa kweendawo, ukukhushulwa okunciphise, ukuhlawulwa komncintiswano, kunye nenkqubo yokuqeshisa ende."
Amanzi amanxweme ayinayo indawo kwiindawo zokusebenzela
Abalawuli be-15 yezibhedlele ezingama-28 abadliwano-ndlebe yi-ofisi ye-inspector jikelele bathi iindawo ezidala okanye ezingenakwaneleyo kwimihlaba yazo "zinzima umngeni wabo wokubonelela ngononophelo.
Ngokomzekelo, enye yezibhedlele ze-IHS yabika ukuba ukuguga kwamanzi ebunjeni obunokulingana ngokubangela ukukhutshwa kwamanzi amaninzi okungena emagumbini okusebenza emva kokuba iipayipi zaso zidala.
Ngokombiko, umyinge weminyaka yobudala (okanye ubude bexesha ukususela ekuhlaziyweni okukhulu) kwizibhedlele ze-IHS yiminyaka engama-37-phantse amaxesha amane kwisizwe esiphakathi kweminyaka eyi-10. Izibhedlele ezimbini ze-IHS ezindala zi-77 ubudala.
Ngokutsho kwabasebenzi bezobunjineli kwi-IHS, izakhiwo zesibhedlele ezona zidala azizange zenzelwe ukubonelela ngononophelo lwempilo yanamhlanje, kwaye ngokuhamba kwexesha, iinkqubo zempilo kunye nobuchwepheshe bezobuchwepheshe zatshintsha kwaye zagqithisa izibhedlele ezininzi ze-IHS, "kuchaza umhloli jikelele.
Abahluphekileyo beMpilo yaseNdiya
Njengemanani evela kwi-IHS boniswa, izimo kwizibhedlele zayo ziye zenza igalelo lempilo engamahlwempu kubantu baseMerika, xa kuthelekiswa nabantu base-United States jikelele.
Inani lokufa kwabantwana phakathi kwamaNdiya aseMerika kunye namaAlaska aseMelika-ku-7.6 ukufa kwabantu ababalelwa ku-1 000 abazalwa ngokuzalwa-i-26% ephakamileyo kunabantu bonke.
Amantombazana aseMelika aseNdiya kunye neAlaska aphindwa kabili njengabantwana abangenabantu baseSpeyinya abafa ngokusuka kwe-infant disease syndrome (SIDS).
Inani eliqhelekileyo lokufa phakathi kwamaNdiya kunye namaAlaska angama-26% aphezulu kunabemi abamhlophe.
AmaNdiya aseMerika kunye namaAlaska azalwe namhlanje anelungelo lobomi obungama-4.4 kweminyaka engaphantsi kwe-US yonke intlanga yabantu-73.7 iminyaka ukuya kwi-78.1 iminyaka, ngokulandelanayo.
Kwimbiko yesigqeba kwingxelo ye-IG, i-IHS ithi "ibudlova kwindlela yokujongana nale mingeni, ukusebenzisana namaqabane omthonyama ukuphumeza isicwangciso esenza umgangatho wokunyamekela izigulane zayo nokufaka inkcubeko yokuphendula i-arhente ukuphucula ukunakekelwa kwezempilo kwizigulane zayo. "
Ukongeza, i-IHS yathi uNobhala we-HHS uSylvia Mathews Burwell wayemisele "ibhunga elilawulayo" elibandakanywa ngabaqeqeshi bezempilo kunye nabameli baseMelika ukuba basebenze kule ngxaki.
UMhloli oyi-General Levinson wacebisa ukuba ibhunga elilawulayo "lenze umzamo owenziwe ukuhlola nokujongana neengxaki ezide zijongene nezibhedlele ze-IHS."
Uphinde wancoma ukuba i-IHS ifanele iqulunqe isicwangciso esitsha, esicwangcisiweyo esicwangcisiweyo-kunye neenkcukacha ezithile zenkqubo kunye neentsuku zokugqiba-ukujongana neengxaki ezixakekayo ze-agesi.
I-IHS yavuma, yathi, "I-IHS iyavumelana neengcebiso. . . kwaye uzibophelele ekwakheni kwimigudu ekhoyo ngoku ukulungisa imiba yenkonzo. "
I-Photosynthesis Iigama kunye neenkcazo
I-Dragonflies, i-Suborder Anisoptera
I-Rosy Cross okanye iRose Cross
Ngaba uBill Clinton angaba nguMongameli wePhondo?